Zurcoin စျေး - အွန်လိုင်း ZUR ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Zurcoin (ZUR)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Zurcoin (ZUR) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Zurcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $27 105.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Zurcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Zurcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ZurcoinZUR သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0001ZurcoinZUR သို့ ယူရိုEUR€0.00008ZurcoinZUR သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00008ZurcoinZUR သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00009ZurcoinZUR သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.000886ZurcoinZUR သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.000623ZurcoinZUR သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00219ZurcoinZUR သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.000369ZurcoinZUR သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000131ZurcoinZUR သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000137ZurcoinZUR သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0022ZurcoinZUR သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.000761ZurcoinZUR သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.000528ZurcoinZUR သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.00733ZurcoinZUR သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0165ZurcoinZUR သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000135ZurcoinZUR သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000149ZurcoinZUR သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.00306ZurcoinZUR သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.000682ZurcoinZUR သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0105ZurcoinZUR သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.116ZurcoinZUR သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.0374ZurcoinZUR သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.00719ZurcoinZUR သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.00271
ZurcoinZUR သို့ BitcoinBTC0.000000009 ZurcoinZUR သို့ EthereumETH0.0000003 ZurcoinZUR သို့ LitecoinLTC0.000002 ZurcoinZUR သို့ DigitalCashDASH0.000001 ZurcoinZUR သို့ MoneroXMR0.000001 ZurcoinZUR သို့ NxtNXT0.00793 ZurcoinZUR သို့ Ethereum ClassicETC0.00001 ZurcoinZUR သို့ DogecoinDOGE0.0291 ZurcoinZUR သို့ ZCashZEC0.000001 ZurcoinZUR သို့ BitsharesBTS0.00376 ZurcoinZUR သို့ DigiByteDGB0.00324 ZurcoinZUR သို့ RippleXRP0.00035 ZurcoinZUR သို့ BitcoinDarkBTCD0.000003 ZurcoinZUR သို့ PeerCoinPPC0.000331 ZurcoinZUR သို့ CraigsCoinCRAIG0.0455 ZurcoinZUR သို့ BitstakeXBS0.00426 ZurcoinZUR သို့ PayCoinXPY0.00174 ZurcoinZUR သို့ ProsperCoinPRC0.0125 ZurcoinZUR သို့ YbCoinYBC0.00000005 ZurcoinZUR သို့ DarkKushDANK0.032 ZurcoinZUR သို့ GiveCoinGIVE0.216 ZurcoinZUR သို့ KoboCoinKOBO0.0227 ZurcoinZUR သို့ DarkTokenDT0.00009 ZurcoinZUR သို့ CETUS CoinCETI0.288
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 12 Aug 2020 01:05:03 +0000.